Qaramada Midoobay - BBC News Somali
Posted at 7:56 25 Sebtembar 20217:56 25 Sebtembar 2021
Posted at 22:14 29 Abriil 202122:14 29 Abriil 2021
Wax ka ogow qodobada ku jira heshiiskii Kenya iyo UNHCR ee xiritaanka xeryaha qaxootiga
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay si rasmi ah ugu gudbisay hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR inay xiri doonto xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma wixii loo gaaro 30-ka bisha Juun ee 2022-ka.
Posted at 12:30 19 Febraayo 202112:30 19 Febraayo 2021
Qaramada Midoobay oo dalbatay in loo xaqiijiyo nolosha Amiiradda Dubai
Xafiiska arrimaha bani'aadannimada ee Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabta ka codsaday in xog laga siiyo xaaladda gabadha uu dhalay maamulaha Dubai.
Posted at 9:50 9 Febraayo 20219:50 9 Febraayo 2021
Garsoore Cabdulqawi oo xilkii madaxwaynaha ICJ laga wareejiyay
Posted at 4:16 18 Jannaayo 20214:16 18 Jannaayo 2021
Dagaal u dhexeeya qowmiyado wada degga Suudaan ayaa ka dhacay gobolka galbeed ee Darfur, waxaana ku dhintay 48 qof, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Suudaan oo soo xiganaysa ururka dhakhaatiirta.
Posted at 3:12 12 Disembar 20203:12 12 Disembar 2020
Shaqaale gargaar oo lagu dilay gobolka Tigray ee Itoobiya
Afar kamid ah shaqaalaha gargaarka ah ayaa ladilay bishii la soo dhaafay intii lagu guda jiray dagaal kii gobolka Tigreega ee Itoobiya, sida ay sheegeen hay'adaha gargaarka.
Posted at 4:08 9 Disembar 20204:08 9 Disembar 2020
Maxaa ka dhalan kara toogashada shaqaalaha Qaramada Midoobey ee gobolka Tigray
Ciidamada Itoobiya ayaa rasaas ku furay sidoo kalena xiray shaqaalaha Qaramada Midoobay kadib markii ay si toos ah u dhex mareen laba bar kontorool oo ku yaalla waqooyiga gobolka Tigray, afhayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Redwan Hussein ayaa sidaas xaqiijiyay.
Posted at 6:24 16 Oktoobar 20206:24 16 Oktoobar 2020
Sucuudi Carabiyaa ayaa ku guuldareysatay inay xubin ka noqoto golaha xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobey kaddib markii 47 dal ay ka qeyb qaateen codeynta dalalka xubinta ka noqonaya golahan.
Posted at 17:32 22 Sebtembar 202017:32 22 Sebtembar 2020
Adduunku waa inuu sameeyaa intii karaankiisa ah si looga hortago Dagaal Qabow oo cusub, ayaa uu ka digay madaxa Qaramada Midoobay, xilli uu furayey shir guud oo ay dejinayaan xiisadaha Mareykanka iyo Shiinaha iyo saamaynta aafada Covid-19.
Posted at 12:20 30 Juunyo 202012:20 30 Juunyo 2020